Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday : Ataovy laharam-pahamehana re ny vahoaka e !
Mizara telo mandrakariva ny fijerin’ny olom-pirenena ny fitantanana ny raharaham-bahoaka. Ny voalohany dia ny mpomba ny fitondrana izay manipika hatrany fa “manao zavatra ny mpitondra ary tena mikarakara”. Ireo sokajin’olona ireo matetika dia ny mahazo tombontsoa amin’ny ataon’ny mpitondra, ary ireo hatrizay dia saika tsy miova fa toa izay hatrany satria isaky ny miova ny mpitondra dia miezaka miaro ny fiotiny izy ireo. Sakaizan’ny mpandresy e ! Ny ampahany faharoa kosa dia ireo tsy mivaky loha amin’izay ataon’ny mpitondra fa mifantoka fotsiny amin’izay hahitany ny anjarany amin’ny ataony, na misy vato misakaan azy aza izay vokatry ny rafi-piaraha-monina sy ny tsy fahombiazan’ny mpitondra. Ny sokajy fahatelo dia ireo maro an’isa te hihoitra, mangetaheta fivoaram-piainana fa tsy afa-manoatra noho ny rafitry ny fiaraha-monina mbola anjakan’ny tsindrio fa lavo, ny kely tsy mba mamindro, ny lehibe tsy mba diso, voatsindrin’ny fahefan’ny sasany, na ara-panjakana na ara-bola, iantefan’ny voka-dratsin’ny kolikoly avo lenta sy ny tsikombakomba maloto mbamin’ny fanamparam-pahefana…
Raha ny tontolom-piaraha-monina iainana ankehitriny no banjinina dia mbola ao anatin’ny fahasahiranana lalina ny maro nefa toa tsy hita taratra loatra ilay fampanakaikaizana ny vahaolana ho an’ireny maro ireny. Maro ny fitakian-jo toa tsy mahazo rariny, raha tsy hiresaka ankoatra ireo mitaky ny valin-kasasarany isika (mpiantoka asa nikojakojana ny lalana, mpiasan’ny Kraoma, mpiasan’ny fampianarana ambony, ny ao amin’ny Fofifa, sy ny hafa). Ho avy tsy ho ela ny fotoam-pahavaratra. Marina fa miezaka manao izay tetik’asa nofaritany ny fitondrana, ary saika tetik’asa nifamatorany tamin’ny vahoaka tamin’ny fifidianana izany, fa ny tsy azo ikimpiana dia nisy tranga tsy nampoizina namely an’izao tontolo izao teto, ka nampikorontana ny tontolom-pihariana maneran-tany, ary nisy akony govana teo amin’ny lafiny sosialy. Ny aretina covid 19 io.
Na inona tetik’asa voafaritra izany na inona fiheverana marina talohan’ny aretina coronavirus dia tsy maintsy mibanjina ny takaitra navelan’ny coronavirus izao tontolo izao. Ka nahoana isika no tsy hieritreritra ny momba izany?
Ho avy izao ny fotoam-pahavaratra. Zary adinon’ny tompon’andraiki-panjakana hatrizay matetika ny mponina amin’ny faritra iva. Raha ny amin’izao fotoana manokana àry no resahina dia azo ambara ho laharam-pahamehana ny fitsinjovana ny vahoaka eny amin’ny faritra iva noho ny tondra-drano mampanahy. Laharam-pahamehan’ny vahoaka amin’ny ankapobeny koa, ohatra, ny tontolon’ny fambolena, satria sady hiantoka ny sakafon’ny mpiara-belona ny vokatry ny fambolena sy fiompiana, no mamorona asa betsaka noho ny tetik’asa hafa….Lasa ataon’ny sasany fandrabirabiana ny filohampirenena mantsy ny filazany hoe “tsy afaka ny tsy hanafatra vary any ivelany isika satria roa taona vao vokatra ny vary volentsika”.
Raha ny famoronana asa no isan’ny mampangetaheta ny maro izao ary izay koa no heverin’ny mpitondra fa katsahiny dia diso ny lalan-kizorana raha tsy ny tontolon’ny fambolena sy fiompiana no faritana ho lohalaharana, ary ny asa avy amin’ny sehatra hafa, tsy hamaivanina fa tsy afaka mamaha ny olan’ny maro an’isa loatra. Mbola azontsika halalinina izany rehetra izany amin’ny manaraka.
« Trano mora » : Destinés aux riches !
CENI Vaovao : Hiteraka korontana raha tsy mahay
Inty sy Nday : Vehivavy tompon’andraikitra no ilaina
Depiote an’Antananarivo Renivohitra : Tsy manao ny asa maha solombavambahoaka azy
Apollon-21 : Ho fantatra tsy ho ela ny marina